Ogaden News Agency (ONA) – Dibadbaxyo Waawayn oo Kadhacay Magaalada Addis Ababa.
Dibadbaxyo Waawayn oo Kadhacay Magaalada Addis Ababa.
Posted by Dulmane	/ July 30, 2018
Wararka naga Soo gaadhaya magaalada Addis Ababa ee xarunta Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegaya dibad baxyo rabshado wata oo maalinnimadii shalay oo Axad ahayd hadheeyay guud ahaan magaalada Addis Ababa iyo nawaaxigeeda.
Dibadbaxan oo aad ubalaadhnaa ayaa lagaga soo horjeeday dilkii maareeyihii biyo-xidheenka wabiga Nile kaas oo dabayaaqadii todobaadkan maydkiisa laga helay magaalada Addis Ababa isagoo gaadhigiisa kujira.
Dibadbaxan oo ay dhigayeen shacabka Qawmiyada Axmaarada ayaa kusoo aaday xili la’aasayay maydka Maareeyaha, kaas oo shalay oo Axad ahayd lagu aasay magaalada Addis Ababa. Dadka ku abtirsada qoomiyada Axmaarada oo uu Injineerku kasoo jeedo ayaa aaminsan in ay qoomiyada Tigteegu kadambaysay dilka Maareeyaha, waxayna qoomiyada Axmaaradu sheegtay in ay u aari doonaan Injineerka.
Dilka maareeyaha biyo xidheenka wabiga Nile ayaa wadanka Gumaysiga Itoobiya ka abuuray khalkhal siyaasadeed iyo daganaansho la’aan, waxayna qoomiyad kasta dilka maareeyaha ku eedaysay qoomiyad kale.
Wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa ah wadan uu kajiro loolan dhinaca qoomiyadaha ah waxaana sanadihii lasoo dhaafay sii xoogaysatay khilaafka iyo dagaalada qoomiyadaha.